Gunmen attack in Anambra State: Ndị omekome wakporo ngagharị iwe APGA, soro ndị nche Obiano gbaa mgbọ, gbuo ọtụtụ na Anambra | Maureensblog
Otu akwụkwọ kwuru na APGA na -akwado ịme nnọkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mpaghara ahụ mgbe ndị oji egbe wakporo ebe ahụ na mberede mgbe nkwadebe ka na -amalite wee malite ịgba egbe, gbakwụnyere na mgbọ malitere n’oge gọvanọ na -abịa na convoy ya, na -amanye nkọwa nchekwa ya. iji chụpụ ndị mwakpo ahụ.
Onye na -ekwuchitere ndị uweojii na steeti ahụ, PPRO, DSP Tochukwu Ikenga, onye kwadoro mwakpo a, kwuru na enwetara otu mgbagha Ak 47, magazin abụọ nwere mgbọ iri atọ na otu Toyota Hilux van n’aka ndị mwakpo ahụ.
Dị ka PPRO si kwuo, ndị uwe ojii na ndị agha nọ ugbu a, ebe ọrụ mop na -aga n’ihu. Otú ọ dị, ọ gbakwụnyere na ọ dịla mgbe ọ laghachiri n’ógbè ahụ.
Kọmishọna mgbasa ozi Anambra na mgbasa ozi ọha, Maazị C Don Adinuba kwuru na ndị oji egbe enweghị ike iguzogide ike ọkụ nke ndị ọrụ nchekwa na ha ga -agbaba n’ụlọ ọgwụ Our Lady of Lourdes nke na -arụ ọrụ nke dị n’ihu ebe mkpọsa ahụ
Adinuba kwuru, sị: “Otu ndị uwe ojii na ndị agha jikọtara ọnụ n’ehihie a gbochiri mwakpo ndị oji egbe amaghị na Odoata Central School, Ihiala, ebe a na -eme atụmatụ na All Progressives Grand Alliance (APGA) ga -ahazi mkpọsa maka ntuli aka gọvanọ na Nọvemba 6 na Anambra. Steeti.
Ndị oji egbe ahụ batara n’ụgbọala dị iche iche na n’ime ụgbọ ala atọ, ya bụ, Toyota Lexus 350 ES nke nwere nọmba ndebanye aha EKY 765 EX, Toyota RAV4 nke nwere nọmba JJJ 434FP na Ford van nke enweghị ike ịchọpụta ọnụọgụ ya n’ihi na ọ gbara ọkụ n’oge mgbọ ogbunigwe. n’etiti ndị egbe na ndị nchekwa.
Ndị na -agba egbe, enweghị ike iguzogide ike ọkụ nke ndị agha na ndị uwe ojii, gbabara ngwa ngwa n’ime nnukwu ụlọ nke ụlọ ọgwụ Lady anyị nke Lourdes nke dị n’ihu ebe mkpọsa ahụ.
Ha merụrụ ezigbo ahụ, n’agbanyeghị na ha jisiri ike gbaa otu onye agha na -agba egwu. Ọ bụrụ na ndị egbe ahụ agbabeghị n’ụlọ ọgwụ nke bụ ebe dị oke egwu ịgba onye ọ bụla, ndị nchekwa ga -agbagbu ha niile ”.
“Ndị ọrụ nchekwa, bụ ndị weghachiri ụgbọ ala atọ na ọgba tum tum atọ ndị oji egbe ji, na -achọgharị ebe ahụ iji chọpụta ndị mwakpo ahụ.
Dị ka kọmishọna ahụ si kwuo, ndị uwe ojii steeti Anambra arịọla ndị nọ na mpaghara ahụ ka ha nyere aka leba anya maka ndị nwere ọnya mgbọ wee kọọ ha, dị ka ndị isi ụlọ ọgwụ Our Lady of Lourdes Hospital, Ihiala na ụlọ ọrụ ahụike ndị ọzọ dị na mpaghara ọchịchị ime obodo. , yana obodo ndị agbata obi dị n’Imo steeti ka a kpesara ndị ọrịa nwere ọnya egbe n’ụlọ ọrụ nchekwa.
Ka ọ dị ugbua, Gọvanọ Obianọ jara ndị uweojii na ndị agha mma maka ịgbagha mwakpo ndị oji egbe ahụ mere na nka.
Mgbe ọ na -ekwu okwu na Atani na Ogbaru LGA ebe ọ nabatara onye na -azọ ọkwa gọvanọ APGA na ntuliaka na -abịanụ, Ọkammụta Chukwuma Soludo, Obiano kọwara nzaghachi ndị nchekwa dịka ọ bụghị naanị ọkachamara, kamakwa ihe ngosi ịhụ mba n’anya.
Soludo, onye n’ime afọ gara aga tufuru ndị uwe ojii atọ na -eche ya nche mgbe a wakporo ya na Machị 31 n’obodo ya bụ Isuofia, Ọchịchị ime obodo Aguata mgbe ọ na -agwa ndị ntorobịa obodo ahụ okwu, toro ndị ọrụ nchekwa maka obi ike na Ihiala.
Ndị nwoke na ndị nwanyị nchekwa a na steeti Anambra tọgbọrọ ndụ ha maka anyị ma ha na-eme ike ha niile maka agbamume ha na-enweta site n’aka gọọmentị steeti ahụ na-eche nche, tinyere ihe ndị ọzọ. Anyị na -atụ anya ihe ngosi ndị ọkachamara karịa ka ụbọchị na -aga yana ka ụbọchị ntuli aka na -abịaru nso “, o kwuru.
Onye otu APGA gosipụtara ọmịiko maka ndị aka ha dị ọcha na mwakpo ahụ wee rịọ ndị iwe na steeti ka ha tọgbọ ngwa ọgụ ha wee họrọ mkparịta ụka iji dozie esemokwu niile maka ọdịmma ndị mmadụ.
tagged with #newsnow, #Soludo, Anambra State, APGA, Gunmen in Anambra State, latest, nigeria, nigeria news, today, Willie Obiano